U hoggaansamida hal-abuurnimada, la jaanqaado Times, raacdada ruuxda kaamil ah ee shirkadda MAXIMA waxay sameysaa dadaal badan si loo daboolo baahida macaamiisha iyo had iyo jeer hal-abuurnimada, si joogto ah ka baxsan. MAXIMA waxay ka shaqeyneysay casriyeynta Khadka Safka Wareegtada Culeyska culus muddada ...
Sannadka 2018 Automechanika Frankfurt, maanta dunida hoggaamineysa carwada ganacsiga ee warshadaha adeegga baabuurta, MIT AUTOMOBILE SERVICE CO, LTD (MAXIMA), oo ku taal Hall 8.0 J17, cabirka istaagga: 91 sqm. soo bandhigay alaabooyin wiish culus culus, furitaanka aag cusub oo Platform Lif ...
Sare u qaadida Platform Duty Platform, isbarbar dhig wiishashka mobilada, waxay u oggolaan kartaa dhaqso dhaqaaqa & dansan. Shaqooyinka badankood ee ku socda gaadiidka ganacsiga waa tijaabo & dayactir fudud, oo dhakhso loo dhammeeyo. Iyada oo la raacayo kor u qaadista Platform, hawlwadeenku wuxuu ula macaamili karaa shaqooyinkan si ku habboon, taas oo badbaadin karta y ...